Barbecue arina: toetra, fampiasa ary tombony | Green Renewable
Raha mieritreritra ny hividy barbecue ho an'ny sahaninao na ho an'ny zaridainao ianao, dia azo antoka fa manana fisalasalana ianao. Misy tsy fitoviana barbecue arina na gazy. Misy karazany samy hafa ary samy manana ny mampiavaka azy ny tsirairay. Voalohany indrindra, tsy maintsy manapa-kevitra isika raha mila «barbecue portable» na «raikitra» iray. Miankina amin'ny zavatra ananantsika ao amin'ny zaridainantsika na sahantsika ihany koa izany.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny barbecue arina sy ny toetrany.
1 Inona ny barbecue tokony hampiasaiko
2 Ny tsy fitovizan'ny barbecue arina sy gazy
2.1 Mampiavaka ny barbecue arina
2.2 Endri-javatra amin'ny barbecue gazy
Inona ny barbecue tokony hampiasaiko
Rehefa te-hametaka barbecue ny tanimbolintsika isika dia tsy misy isalasalana. Ny iray amin'izy ireo dia raha tsy maintsy manamboatra barbecue biriky isika, mividy izay vita mialoha sy gazy azo entina na barbecue arina. Voalohany indrindra, tsy maintsy manapa-kevitra isika raha solosaina finday na raikitra no ilaintsika. Miankina amin'ny karazana habaka ananantsika ao amin'ny zaridainantsika, mety ho liana amin'ny barbecue efa vita na biriky isika. Amin'ireo tranga ireo mifampiraharaha amin'ny barbecue arina misokatra. Izany hoe, eto dia hanana fandroahana amin'ny lafiny rehetra amin'ny hafanana sy ny setroka isika. Izany dia mahatonga anay handany solika bebe kokoa noho ny barbecue finday.
Ny barbecue finday dia manome tombony ny fananana sarony hanidiana ny fatana. Raha ny tsiro kosa dia tsy ho hitanao ny fahasamihafana rehefa mahandro ny iray na ny iray hafa. Ny fahasamihafana dia mankasitraka ihany arakaraka ny karazan-tsolika ampiasainao. Raha mampiasa barbecue arina, etona na hazo ianao dia hanana tsiro hafa ao amin'izy ireo. Andao hojerentsika hoe inona avy ireo fahasamihafana lehibe eo amin'ny barbecue arina sy gazy.
Ny tsy fitovizan'ny barbecue arina sy gazy
Raha nisafidy barbecue finday ianao dia fotoana izao hanapahana hevitra raha hividy iray izay manana fanidiana hidy trano isika na tsia. Ilaina ihany koa ny mahafantatra ny karazana solika ampiantsika. Tsara kokoa ny misafidy ireo barbecue ahafahana manarona ny trano. Ary io karazana barbecue io no ahafahantsika mitsitsy solika sy mahandro sakafo amin'ny fomba haingana kokoa isika. Amin'ireny barbecue ireny izay tsy manana fonony dia misy fatiantoka hafanana lehibe kokoa, noho izany dia elaela vao mahandro ny sakafo. Miovaova kely ihany koa ny tsiro.
Andao hojerentsika inona ny mampiavaka ny barbecue arina.
Mampiavaka ny barbecue arina
Ireo dia ireo izay tsotra sy mora ampiasaina kokoa noho ny an'ny gazy. Ankoatr'izay, rehefa mividy, raha tsy zavatra izay hampiasaintsika matetika loatra dia azontsika atao ny mandray fa mora vidy kokoa izy ireo. Raha tsy tokony hampiasa ny barbecue isika amin'ny fivorian'ny fianakaviana ho fampiasanay manokana matetika, Tsy liana amin'ny fividianana barbecue misy vidiny lafo izahay. Hikaroka ny fomba mora indrindra "fialana amin'ny olana" isika.
Raha resaka fandrahoan-tsakafo dia olana hafa. Ny barbecue arina dia sarotra kokoa ny mahazo mari-pana mety tsara hahafahana mahandro sakafo tsara. Amin'ny barbecue gazy dia mora kokoa ny mahatratra ny mari-pana ilain'ny sakafo. Ao amin'ireo kitay na saribao dia tsy maintsy mandany fotoana bebe kokoa isika mba hahatratrarana fa ny vainafo dia manana mari-pana ampy hahafahana mampita tsara ny sakafo.
Mety hampidi-doza kokoa noho ny barbecue gazy amin'ny voalohany ny barbecue vita amin'ny karbonina na hazo. Ary moa ve ny vainafo rehetra afaka mitsambikina avy ao an-trano ka miteraka afo. Ho an'ity, ny toerana alehantsika hamelana ny barbecue dia tsy maintsy omanina amin'izany. Izany hoe tsy maintsy esorintsika amin'ny ahitra maina izany raha manana zaridaina isika. Tsara kokoa ny mametraka azy io amin'ny faritra misy azy gorodona artifisialy izay tsy misy atahorana amin'ny afo.
Raha vantany vao vita ny fikarohanay ny sakafo, ny barbecue arina dia manana asa lehibe kokoa hahafahana manala ireo vainafo mirehitra. Afaka milaza isika fa ity karazana barbecue ity dia maloto kokoa ary manana asa fikojakojana lehibe kokoa.
Endri-javatra amin'ny barbecue gazy
Amin'ny ankapobeny dia manana fonony foana io karazana barbecue io hisorohana ny afo tsy hivoaka noho ny vokatry ny rivotra. Manampy amin'ny fampitomboana ny fahombiazany izany rehefa mahandro sakafo. Ny barbecue-n'ny entona dia mahatratra hafanana mahomby indrindra handrahoana sakafo haingana be kokoa noho ireo teo aloha. Izany dia mahatonga azy io ho haingana kokoa ary hahomby kokoa. Ny barbecue de lasantsy dia tsy mampiasa vainafo, noho izany dia azo antoka kokoa izy ireo raha ny fahitana ny karazana afo mety hiteraka fipoaka ivelan'ny trano noho izany antony izany.
Ireto misy zavatra tsy tokony ho adino. Ny loza ateraky ny barbecue arina dia miankina amin'ny karazana fampiasana omentsika. Raha tsy mitandrina isika rehefa mametraka ny barbecue amin'ny toerana tsy mampidi-doza dia ara-dalàna raha mety hisy loza mety hitranga. Anjarantsika no afaka mampiasa karazana barbecue iray na iray hafa.
Mikasika ny vidiny dia afaka milaza isika fa lafo kokoa ny barbecue-etona satria efa be pitsiny kokoa. Miankina amin'ny karazany, maodely ary fahasarotana amin'ny fatana io fa tsy amin'ny solika. Afaka mahita barbecue-by amin'ny vidiny ambany dia ambany isika. Na izany aza, izany rehetra izany dia miankina amin'ny fampiasana izay homentsika ny tsirairay amin'izy ireo.
Tokony hotadidintsika fa miankina amin'ny fampiasana izay homentsika ny barbecue, raha zavatra matetika na tsia, dia mety hahaliana antsika ny iray na ny iray hafa. Raha zavatra hampiasaintsika mandritra ny fotoana fohy dia tsara kokoa ny mahazo barbecue arina. Izany dia satria mora vidy kokoa sy mora ampiasaina izy ireo. Na dia manana fikolokoloana kely kokoa aza izy ireo, raha tsy maharitra sy matetika ny fampiasany dia mihena ihany koa io fikojakojana io. Momba ny loza, miankina amin'ny toerana hametrahantsika azy io. Ny tsara indrindra dia tadiavo ny lavaka ao amin'ny zaridaina izay tsy misy ahitra maina ary tsy misy atahorana ny afo amin'ny fitsambikin'ny arina.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny barbecue arina, ny toetrany ary ny tombony azony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Barbecue arina